Shariif Xasan:Heshiiska shidaal qodis ee uu la galay shirkadaha shisheeye oo lagu dhega yahay – idalenews.com
Shariif Xasan:Heshiiska shidaal qodis ee uu la galay shirkadaha shisheeye oo lagu dhega yahay
Kulan ay magaalada Baydhabo ku yeesheen Golaha Badbaadada Koofur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya, iyo heshiisyo uu madaxweyne Shariif xasan la galay shirkado baara shidaalka.
War-murtiyeed ay soo saareen golaha badbaadada Koofur Galbeed waxaa aqriyey afahyeenka golaha Aadan Maxamed waxa uuna yiri “Falanqeyn ka dib goluhu waxa uu soo saaray in sida marar hore dhacday in hoggaanka ku meel gaarka ah ee Koofur Galbeed uu heshiisyo daahsoon uu la galay shirkado shisheeye oo maalintii Isniinta oo Taariikdu ahayd 12-kii Febraayo waxaa heshiis wada-galay hoggaanka ku meel gaarka ah ee Koofur Galbeed iyo shirkadda Zed Karow, heshiiskaas oo ka dhacay Jabbuuti sida aad wada ogtihiin gobollada Shabeellada Hoose waxaa laga hir-galin doonaa mashaariic lagu raadinayo dano dhaqaale una gaar ah Shariif Xasan danna ugama jirto bulshada halkaasi ku nool”.
Aadan Maxamed waxa uu nasiib darro ku tilmaamay heshiisyada uu Shariif Xasan Sheikh Aadan la galay shirkado uu sheegay in Jabbuuti ay u baaraan shidaal xaqna uusan u laheyn in uu la galo heshiis.
“Marka la leeyahay Shidaal ayaa la baaraa shacriga shidaalka wasaaradda badroolka ay soo diyaariso waa in uu soo maraa golaha wasiirada, haddana waxa ay hortaallaa baarlamaanka welina ma an-sixin maxay tahay waxa la baarayo, sharciga lagu baarayo intee laga keenay? Qodobkaasi waa mid lagu xad-gudbay”.
Ugu danbeyn Golaha Badbaadada koofur Galbeed Soomaaliya waxa ay ugu baaqeen madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisulwasaaraha in la ilaaliyo ku dhaqanka dastuurka Soomaaliya.
Topnew:Taliyaha ciidanka xoogga oo si kulul ugu jawaabay hadalkii la-taliyaha amniga ee madaxweyne Farmaajo
Suuqa Bakaaraha:Inta badan Ganacsiga oo saaka albaabada loo laabay